Toner index | ASC toner
Hunhu hwese hwerudzi rwetoni unotsanangurwa nezvinhu izvi zvitanhatu zvinotevera: kusviba, dota repasi, kugadzira, kugadzirisa, kutambisa toni toner, uye ghosting. Izvi zvinhu zvinoenderana pamwe uye zvinokonzerana. Izvo zvikonzero zvekukanganisa izvi zvinotsanangurwa pazasi.
1. Nhema: Kuverenga kukosha kwekusviba ndeyekuti iyo yakasviba kukosha tester inotanga kuburitsa imwe nhamba yematanda akasimba, ichirova iyo chiero kuti chiyerwe, uyezve yozodzosera kumashure kune yakasviba kukosha tester, voverenga chiyedza chakatemwa inopfuura yakagadziriswa Iko kukosha kunoverengwa nehurongwa. Iyo yakakwira kukosha kwekusviba kwetoni, zviri nani maitiro ekudhinda ari. Iyo yakasviba yepasi rose kukosha standard (yekutanga OEM) ndeye 1.3. Kuti uite zvido zvakasiyana zvemaindasitiri akasiyana-siyana, avhareji kuterera kwekukosha kwetoni yekambani kazhinji inodzorwa panenge pa1.4.
2. Pazasi ash: Iyo yakadzika dota ndeye kuyedza kukosha kwekusviba kwenzvimbo isina chinhu mune yakadhindwa sampuli isina kana dema rekuzivisa. Mumamiriro ezvinhu akajairika, iyo yakadzika ash kukosha yeiyo yekutanga OEM toner ndeye 0.001-0.03, kana iyo yakakura kupfuura 0.006, mhedzisiro yekutarisa inozoona kuti sampuli yakadhindwa yakasviba zvishoma. Izvo zvinhu zvikuru zvinokanganisa pasi pesimbi kukosha ndeye magetsi nemagineti zvinhu zvetoni. Imwe neimwe mhando yekudhindisa inoda kuti iwo emagetsi emagetsi emagetsi emoni anowanzove akasiyana. Ichi zvakare chikonzero nei tichisimbisa iyo yakakosha poda. Mukuwedzera, nekuda kwemaprinta kana toner cartridges inogonawo kukonzera pasi puti. Iyo yepasi puti yeASC toner inodzorwa pazasi 0,005.
3 Kugadziridza kukurumidza: Kugadzirisa kutsanya kunoreva kugona kwetoni yakasungirirwa pamusoro pepepa kuti inyunguduke uye kupinda mukati mefaira. Iko kunaka kweiyo Resin chinhu chikuru chinokanganisa kusimba kwekugadziriswa kwetoni.
4. Kugadzirisa: Kugadzirisa zvinoreva iwo madota (DPI) ayo anogona kudhindwa neainch. Ukobvu hwetoni zvimedu zvinokanganisa zvakananga kugadziriswa. Parizvino, kugadziriswa kwetoni kunonyanya kuve 300DPI, 600DPI, 1200DPI.
5. Weti toner rate: Iyo tsvina toner rate inoreva chikamu chetsvina toner inogadzirwa neimwe huwandu hwethani mukudhinda kwese. Iyo tsvina toner rate inokanganisa zvakananga huwandu wemashizha akadhindwa ane huwandu huwandu hwetoni. Chiyero chinoda kuti huwandu hwetoni toner hushoma pane gumi muzana.
6. Kune marudzi maviri emweya wekuita gonyeti: yakanaka magonyeti uye mweya yakaipa. Iyo yakanaka ghost mufananidzo mufananidzo wegonyeti isu tinowanzo taura, ndiko kuti, iro vhezheni (kana pepa) rinooneka zvakananga pazasi pezvinyorwa (kana mamwe maitiro) (bepa remapepa), asi kukosha kwehuremo (kusviba) kwakadzikira kwazvo kupfuura iwo. . Kazhinji inoumbwa panguva yekugadzirisa kana kugadzirisa nzira.
Nguva yekutumira: Chivabvu-22-2020